War-saxaafadeed: Daljir oo soo dhawaynaysa heshiis ay la gaadhay xafiiska arrimaha warfaafinta ee madaxtooyada Puntland. – Radio Daljir
Radio Daljir waxa uu soo dhaweeynayaa in xal laga gaaray is-faham-waa kooban oo dhex-maray idaacadda iyo madaxtooyada Puntland kadib markii saxafiyiinta Radio Daljir si cad looga hor-istaagay in ay galaan xarunta madaxtooyada fiidnimadii 1-dii bishan July, halkaaso oo ay ka dhacaysay xaflad lagu maamuusayay maalinta qarannimada Soomaaliya.
Kulan 4-tii bishan Julay ku dhex-maray xarunta madaxtooyada Puntlnad mas’uuliyiin ka kala socda labada dhinac, isla markaana ay goob-joog ka ahaayeen mas’uuliyiin ka socda Ururka saxafiyiinta Puntland ee MAP, ayaa si qoto-dheer oo saraaxad leh looga hadlay dhacadadaas.
Falanqayn iyo hoga-tusaalayn dheer kadib dhinacyadu waxa ay isla garteen:
1. In tallaabadii looga hor-istaagay wariyayaasha Daljir in ay tabiyaan dhacadii 1-da July ay ahayd khalad farsamo oo ka yimid mid ka mida xafiisyada madaxtooyada, kana fogayd mid qorshaysan, madaxtooyada Puntland-na ay u isaman yihiin idaacadaha ka shaqeeya Puntland.
2. In saxaafadda Puntland ay tahay mid xor ah, Puntland na ay ka jiraan sagaal idaacadood, balse ay jiraan khaladaad badan oo ka yimaada idaacadaha, sababtuna tahay aqoonta iyo xirfadda wariyaasha oo aan gaarsiisnayn heer ay ku qaadi karaan mas’uuliyad u dhiganta xuquuqda ay leeyihiin.
3. In Ururka Saxafiyiinta Puntland (MAP) uu ka shaqeeyo sidii loo dajin lahaa siyaasadda warbaahinta Puntland isaga oo wada-shaqayn arrinka kala yeelanaya wasaaradda warfaafinta Puntland.
Maamulka Radio Daljir waxa uu si buuxda ugu qancay sharaxaaddii madaxtooyada Puntland, wuxuuna si buuxda ugu faraxsan yahay sidii niyad-samida lahayd ee ay madaxtooyadu ugu soo joogsatay xallinta iyo turxaan-bixinta waxyaabihii ay idaacaddu ka tabanaysay ee ku soo baxay warsaxaafadeedkii 1-dii July.
Agaasimaha Guud ee Radio Daljir